प्राकृतिक कपाल को हेरविचार 2018 | सुरक्षात्मक स्टाइल र व्यवस्थापन
तपाईंको एक्सटेन्सन कसरी बनाउने? उचित स्टाइल र रखरखावको साथ!
पहनुअघि निर्देशनहरू धुनु:
तपाईंको एक्सटेन्सनलाई धोकाउन यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कंडीशनर मात्र स्थापना गर्नु अघि। यसले कपाललाई नरम र तालमेल मुक्त गराउँछ।
हामी सिफारिश गर्छौं औसिस मिस्ट वा हर्बल एसिन्स नमस्कार हाइड्रेशन (वाल्मार्ट र केहि स्थानीय सौन्दर्य आपूर्ति पसलहरूमा भेट्न सकिन्छ) वा घुमाउरो कपाल बनावटका लागि तयार गरिएको कुनै कंडीशनर।
सबै बंडीहरू तपाईंको बन्डलबाट लिनुहोस्, सबै तारहरू संतृप्त नभएसम्म पूर्णतया पानीको कपाललाई गीलो पार्नुहोस्। कंडीशनरको साथ मात्र, कपाल घुमाउनुहोस् तब एक ठूलो दाँतको कङ्गन संग, डेनमन ब्रश, विग ब्रश वा भित्री ब्रश बाल क्यान्सरको कपाल संग जोड्न र बाहिर कुल्ला।
लागि Kinky Curly Textures एक्सटेन्सनले हेन्जरमा कपाल माथि राख्छ र कपाललाई सुक्न दिन्छ। यो सही CURL पेट्रोल हुनेछ र CURLS POP बनाइनेछ! कपाल सुकाइदिनुहोस्.
लागि अफ्रो किन्की बनावट तौलियामा बाक्लो कपाल राख्नु र सुत्ने कोसिस गर्न अनुमति दिनुहुन्छ, यो ठूलो सिकार रोक्न सक्नेछ। यदि तपाईंले छनौट गर्नुभयो भने तपाइँले ह्यानरमा लट्याउन सक्नुहुनेछ। कृपया क्यान्सर परिभाषित गर्न केवल कपाल कपाल र डेनमार्क ब्रश समाविष्ट गर्न एउटा विशाल दाँत प्रयोग गर्नुहोस्। सुत्न नगर्नुहोस्।
लागि किन्की सीधा बनावटहरू तपाईं सुत्न वा बाल सुत्न सक्नुहुन्छ।
लागि Wigs कृपया तल निर्देशकीय भिडियो हेर्नुहोस्। तपाईले कसरी हेर्नुहोस् विग कसरी तस्वीर जस्तो देखिन्छ।
यहाँ मेरो NaturalHairExtensions.com मा हामी तपाईंको पैसा को लागि सबै भन्दा ब्क प्राप्त गर्न मा विश्वास गर्छौं। राम्रो कपाल किन्नु केवल तपाईलाई अब सम्म लाग्छ! उचित कपालको हेरविचार, सुझावहरू सुझाव र रखरखावले तपाईंको एक्स्टेन्सनको लामो समयसम्म सुनिश्चित गर्नेछ।
यो प्रकट हुन अघि शेडिंग रोक्नुहोस्!
केवल तथ्याङ्कहरू, सबै बाल भेडाहरू सामना गर्न दिन्छ ... तर शेडिङ कम गर्ने तरिकाहरू छन्।
पहिले तपाईंको कमरहरू छाप्नुहोस्। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ! हामी $ 10 को सानो शुल्कको लागि बाट सीलेंट प्रस्ताव गर्दछौं।
दोस्रो, ब्रस्ल ब्रश प्रयोग नगर्नुहोस् किनकि तिनीहरूले व्यक्तिगत बाल फाइबरमा कुच्याउँछन् र उनलाई चोरीबाट पछाडि राख्छन्। सँधै ठूलो दाँत कम्पास वा प्याडल ब्रश प्रयोग गर्नुहोस्।
शुद्ध र हालत राम्रोसँग तपाईंको कपाल!
हामी सिफारिस गर्ने बालहरू सफा गर्न Giovanni को कार्बनिक क्लीनिंग शैम्पू। एक कम महंगा विकल्प हो हर्बिस हेलो हाइड्रेशन शैम्पू।
हामीले सिफारिस गर्ने बालहरू शर्त गर्यौं हर्बल सार हेल हाइड्रेशन (हाम्रो #1 छनौट) वा कुनै पनि कंडीशनर भिडीयो / घुमाउरो कपालको लागि तयार छ।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि सबै सुन्नु पहिले नै असंगत भएको छ र दिशामा सारिएको छ भने यदि2साइड पनीकोटहरू दिनुहोस्। स्नानको तर्फबाट एक टाउकोमा तपाईंको टाउको झुकाउनुहोस् र पानीले तपाईंको कपाल पूर्ण रूपमा पूरा गर्न अनुमति दिन्छ, एक समयमा मात्र एक मात्र काम गर्दै। शैंपू आफ्नो हातमा जोड्नुहोस् र आफ्नो कपाल बाट्ने देखि टाउको सम्म आफ्नो कपाल तल। यो अनावश्यक टंगल्सहरू मात्र सिर्जना गर्नेछ किनकि मर्नु नगर्ने वा बालबालिकालाई एकत्रित बनाउनुहोस्!5मिनेटको लागि तपाईंको कपालको माध्यमबाट आफ्नो हातलाई स्लाइड गर्न जारी राख्नुहोस्। पहिले आफ्नो बाल को माध्यम ले पानी को प्रवाह को अनुमति गरेर कुल्ला, तपाईं कुखुरा को प्रक्रिया को गति को गति को लागि आफ्नो हात को माध्यम ले स्लाइड गर्न सक्छन् तर सम्झना नगर्नुस् वा बाल गुच्छा। तौलिया संग ब्लाट र बाल को लागि ड्रिल को अनुमति दिनुहोस
तपाईंको कंडीशनर र सह-फोहरको लागि एउटै विधि प्रयोग गर्नुहोस्
शैम्पू: लगभग एकपटक हरेक3हप्ता
Co-Wash (कंडीशनर धो): जसलाई प्राय आवश्यक पर्दछ
तपाईं बेडमा जानुअघि:
एक रात राइटिन सिर्जना गर्नुहोस् र यसलाई स्टिक गर्नुहोस्
तपाईंको बाल्यकालको सामु अघि जानको लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। रातमा तपाईंको कपाल माथि र रेशम / साटन स्कार्फ वा रेशम / साटन बोटनेटसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। बोनटप जसले लामो समयसम्म लम्बे दिन्छ। (माथिको तस्वीर हेर्नुहोस्)
भिडीयो / घुमावटको ढाँचाका लागि हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाइँले तपाइँको बालमा 5-10 ठूलो मोडि वा ब्रैड राख्नु भएको छ भने यसलाई बोनेटमा राख्नुहोस्।
सीधा बनावटको लागि हामी तपाईंको कपाल लुकाएर सिफारिस गर्दछौं र यसलाई रेशम / साटन दुग्धमा राखिदिन्छ।
यो रातो दिनचर्या पछि तपाईको एक्सटेन्सन लामो हुनेछ, अझ राम्रो देखिन्छ, र टंगलिंगलाई रोक्न जुन अत्यधिक बहालीमा जान्छ।
तपाईंको एक्सटेन्सनको उपचार गर्नुहोस् जहाँ उनीहरूको वास्तविक प्राकृतिक कपाल जहाँ छन्!
यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटक हो: यदि तपाइँ आफ्नो एक्स्टेन्सन मनपर्छ तिनीहरूले तपाईंलाई फिर्ता प्रेम गर्नेछन्! यहाँ केहि र डन'हरू छन् ​
यदि तपाईले सुत्न पछाडी धकेल्न निर्णय गर्नुहुन्छ भने तपाइँको कपाललाई सुक्खाउन अनुमति दिनुहोस् तापनि तापक्रमको तापक्रम प्रयोग गर्नुहोस्
जब तापक्रमका साथ तपाईंको कपाल स्टाइल गर्नका लागि सँधै ताप्लेट बनावटको साथमा गर्मीका संरक्षकहरू प्रयोग गर्दछ। एक उच्च एकाग्रता गर्मी को गर्मी को क्षति हुन सक्छ र प्राकृतिक कर्ल पैटर्न (ढीला) बदल सकते हो। वाल्मर्टसँग छनौट गर्न गर्मीको सुरक्षाकर्मीको एक विस्तृत दायरा छ। जॉन फ्रिडाको तापक्रमको हार थर्मल गार्ड प्रोसेन्ट स्प्रे एक राम्रो प्रयोग हो किनभने त्यसको हल्का वजन र तेल नि: शुल्क।
हाम्रो रातो दिनचर्या पछ्याउनुहोस् वा आफ्नै बनाउनुहोस्।
हाम्रो धोनीको पुनरुत्थानको सही पालना गर्नुहोस्।
प्याडले झाडा र चौडा दाँत कम्बलहरू प्रयोग गर्नुहोस्
प्रायः तपाईंको कपाललाई कपाल बनाउनुहोस्
यदि कुनै पनि रंग सेवाहरू प्रयोग गर्दा, रंगीन, ब्लीच किट्स, वा स्थायी रंगहरू एक पेशेवर स्टाइलिस्ट वा रंग टान्नीशियन खोज्न निश्चित हुन्छन्। हामी कुनै पनि रासायनिक परिवर्तन पछि गुणस्तर ग्यारेन्टी गर्दैनौं त्यसैले तपाईंको लगानीको रक्षा गर्न निश्चित हुनुहोस्।
आफ्नो घर को लागि एक बिच को जोड मत करो! जब स्टाइल उत्पादनहरू थपिन्छन्, कपालले म्याट गर्न र टंगल लगाउँछ। यदि तपाईंसँग घाँटी विस्तार छ र तपाईं बाल ट्याग गर्न वा फ्र्रिज कम गर्न चाहानुहुन्छ मात्र एक सानो रकम विरोधी-फ्र्रिज सीरम प्रयोग गर्नुहोस्। यदि उत्पादनहरू थपिन्छन् भने तपाइँ तिनीहरूलाई हर्बल एस्सेन्स हेल हाइड्रेशन कंडीशनरसँग सुचारु बनाउने बिना हटाउन सक्नुहुन्छ।
कहिलेकाँही थोरै वा रिसमा थियौं जब तपाईंको कपाल शैलीमा नगर्नुहोस्, धुलो वा धुँवा लगाउनुहोस्। यो निराशाको लागि एक नुस्खा हो र तपाईंको बाल संग धेरै नराम्रो कारण हुनेछ।
ब्रिस्टल ब्रश प्रयोग नगर्नुहोस्।
बिना बालोंको कुनै पनि रासायनिक परिवर्तन प्रयास नगर्नुहोस् व्यावसायिक निर्देशन
प्रत्येक बनावटको लागि कपालको हेरविचार
हामी यस युद्धको साथमा एक जना मित्र बन्न सक्दैनौं! यसको बिरुवाको राम्रो तरिकाले पानी कंडीशनर र ठूलो दाँत आउँछ। एक टंगले चिट्ठी पनि काम गर्नेछ। डेनमन ब्रश प्रयोग गरेर धेरै गाह्रो हुन सक्छ, समय व्यतीत गर्दै र बालोंबाट चोरी पोर्न सक्छ। जब यो सुकेको हुन्छ यो कपाल संग जोड्न प्रयास नगर्नुहोस्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि यो पानी र कंडीशनरसँग धेरै हाइड्रेटेड हुन्छ।
यो कपाल चोटी बहिनी र बहिष्कारको साथमा राम्रो हुन्छ। तपाईंको प्राकृतिक कपालको लागि तपाईंलाई कुन स्टाइल उत्पादनहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो कपाल मात्र तपाईंको 4b 4c कपाल जस्तै मिस्टरलाई माया गर्दछ। ट्विस्ट बहिष्कार र चोटी बहिनी यो कपाल संग केहि समय सम्म र कर्ल खिंचाव मा मदद गर्दछ!
यस पृष्ठमा यो उत्पादन सूची हेर्नुहोस्.
हामी डेनमन ब्रश प्रयोग गरेर सिफारिस गर्छौ वा यस बालको साथ संयोजन लिईयो। Afro किन्की जस्तै यो कपाल नमीलाई प्रेम गर्दछ। कंडीशनरमा बस एक हल्का छुट्टी र पानी राम्रो काम गर्दछ।
डेनमन ब्रश प्रयोग गर्दा पनि कर्सहरू पप बनाउँछ।
किन्की सीधा, Perm Yaki, coarse yaki, हड्डी सीधा:
यो कपाल को धेरै कम रखरखाव को आवश्यकता छ र धेरै उत्पादनहरु को रुचि छैन। यसले उत्पाद निर्माणको साथ राम्रो व्यवहार गर्नेछैन।
यदि सम्भव छ भने रातमा आफ्नो कपाल लिपि गर्ने टंगलिंग कम गर्न र अर्को दिनको लागि सुन्दर बनाउनु।
मेरो प्राकृतिक कपाल एक्सटेन्सनको भ्रमणको लागि धन्यवाद!
अफ्रो किन्की धो डे